Himoonni armaan gadii utaalcha raawwatu.
sagantaa xiqqaa kan asxaan agarsiifame sagantaa xiqqaa ykn faankishiniini irraa waami. Himoonni asxatti aanan kan raawwatu hanga himni itti aanu deebi'utti. Isaan booda,sagantaan hima hima GoSub aanu waliin itti fufa.
sagantaa raawwii itti fufaa kan Sub ykn Function keessattii kan adeemsa sarara asxan agarsifame.
sararota lakkadda sagantaa keessattii baay'ee ibsame keessa tokkotti qoodi, gatii himannoo irratti hundaa'un.
Title is: Utaali